Degmada balanbale oo laga mamnuucay gaadiidka muraayadaha madow ay ku xiran yihiin. – The Voice of Northeastern Kenya
Degmada balanbale oo laga mamnuucay gaadiidka muraayadaha madow ay ku xiran yihiin.
Star FM September 2, 2018
Wararka ka imaanaya degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maamulka degmaasi uu gabi ahaanba mamnuucay inay degmadaas iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ay ka sahqeeyaan gawaarida ay ku xidhan yihiin muraayadaha madow ee Beensalka loo yaqaano Kadib amar ka soo baxay maamulka degmada.
Madaxa arimaha bulshada ee degmada Balanbale ayaa sheegay in amarkaan uu yahay mid la doonayo inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u dhaqan galo cidii aan u hogaamsamina laga qaadi doono talaabo sahrciga waafaqsan.
Masuulkaan ayaa tilaamay inay talaabadaan qayb ka tahay qorsheyaasha lagu sugayo amaanka degmada sidoo kale aad loo baarayo gawaarida magaalada ka baxa iyo kuwa soo galaya si loo hubiya waxyaabaha ay gaadiidkaasi sidaan.
Wuxuu sidoo kale sheegay in magaalada ay ka howl galaan ciidamo amaankeeda u xilsaaran lagana doonayo inay hubiyaan dhamaan dhaqdhaqaaqyada ka jira gudaha degmada Balanbale iyo deegaanada hoos yimaada.
Ciidamada amaanka ee ka howl gala degmada Balanbale ayaa todobaayadii aan soo dhaafnay waxay magaaladaasi ka samaynayeen howlgalo amaanka lagu xaqiijinayo kadib shaqaaqooshin ka dhacay halkaasi.
← Ciidamada amaanka degmada Waabari oo xiray dad looga shaqkisan yahay Bam Gacameed lagu tuuray fariisin ciidan.
Fahfaahino Laga Helayo Diyaarado Xalaya Fiidki Duqeymo Ka Geystay Degmada Bu’aalle →